Ibsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIbsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo
Jaarmiyaalee Qabsoo Bilisummaaf gaggeessan keessattis haa tahu jaarmiyaalee kamuu keessatti dhabdeen ni uumama.
Dhibdee kana immoo danbii ittiin bulmaata isaaniin ni furatu. Adda Bilisummaa Oromoo keessattis yeroo adda addaatti namoota dantaa fi fedhii dhuunfaa isaaniif dursa kennanii kaayyoo fi akeeka jaallan qabsoo keessatti kufanii fi kufaa jiraniin dhaaba dhiigaa fi lafee qabsaa’otaan ijaarame yeroo diiguuf carraaqan murannoo qabsaa’ota keenyaa fi cichoomina dhaloota qubeen burjaajjii fi gufuulee kamuu dhaabni keenya keessa darbaa as gahe.
Ammas wareegama kaffalamu hunda dhaloonni kaffalee dhaaba jaallan isaanii itti wareegamanii as gahe dabarsee harka gantootaa fi ayyaanlaallattootaatti hin kennu.
Yeroo ammaa kana hoggantootni dhaaba keenya ABO, qondaaltotni, miseensotniifi deeggartootni dhaabichaa warri sabaaf malee dantaaf hin jiraanne haqa dhabanii dabaan, shira xaxxootaa fi ayyaanlaallattootaan hidhaatti dabartamanii dararamaa jiraniitti, yeroo itti waajjirri Adda Bilisummaa Oromoo muummeen Gullalleetti argamu dabalatee kanneen godinaalee fi aanotaa war